Ndị ọkachamara China Dongshen dị larịị sịntetik ntutu isi etemeete ntọala onye nrụpụta na onye na -ebubata ya Dongmei
Dongshen ọkachamara ewepụghị elu sịntetik ntutu etemeete ntọala ahịhịa
Flat Top Foundation Brush - Tinye ngwaahịa Liquid, Ude ma ọ bụ ntụ ntụ n'adịghị ike yana enweghị ntụpọ.
Ịkwụ ụgwọ T/T, Paypal, Western, wdg.
● Dongshen Ntọala ahịhịa: Nke a bụ ahịhịa ntọala kacha mma nke dị nro iji metụ ma tinye ntọala na ihu gị, nwere akpụkpọ ahụ, ọ naghị amịkọrọ ma na-emebi ngwaahịa ma na-etinye ntọala nke ọma.
Ense Ọbara, Firm, na Bristles Dị Ncha: A na -eji ahịhịa sịntetị Flat Kabuki Foundation, dị nro ma sie ike, na -ekpuchi obere ntụpọ, ntụpọ na ọbụna ihe otutu nwere ọtụtụ ụdị ntọala mkpuchi zuru oke.
Ngwa dị ọtụtụ: ahịhịa anaghị ahapụ ọnya ọnya. Ezi etemeete na -enweghị ntụpọ maka ntụ ntụ, mmiri mmiri, ihe mkpuchi, ude, ihere, ihe mkpuchi, ihe ntecha. ọ bụ naanị obere ntọala na ahịhịa ka achọrọ maka nsonaazụ kacha mma, jiri yaDongshen ahịhịa iji mepụta mkpuchi eke na enweghị isi.
Design Kere Ọkachamara na Ihe: 100% enweghị obi ọjọọ & anwaleghị anụmanụ, ha niile Dongshen Ntucha etemeete na -aga usoro nzọụkwụ 80 n'oge nrụpụta iji gbochie ịwụfu, ihe anyị niile na -enye mmetụta pụrụ iche, nke okomoko.
Aran Nkwa dị oke mma: etemeete zuru oke na Dongshen Ntọala ntọala, yana nnukwu ọrụ nkwado, nkwa nkwụghachi ego 100% ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Ndị ahịa bụ Chineke anyị, anyị chọrọ iwere nke kacha mma maka onye ọ bụla n'ime gị.
● Ntutu sịntetik sitere n'okike: Sntutu na -adịkarị mma ma na -esighi ike, bristles dị elu. Sndị enyi na-adị nro ma dịkwa nro, ọbụlagodi etemeete. No akara akara, enweghị ntụ ntụ. A na -ebubata akụrụngwa ndị ahụ site na akara BASF nke Germany.
Nlekọta anya - Mgbe ihichachara, jiri nwayọ pịa akwa nhicha ahụ na akwa nhicha akwụkwọ ma ọ bụ paịlị owu iji wepu mmiri ngwa ngwa ma kpọgide ahịhịa etemeete ka ọ kpọọ nkụ. Cheta ka ị ghara ịgbagọ bristles ma ọ bụ jiri ihe nhicha ntutu (ikuku na -ekpo ọkụ) kpaa ahịhịa etemeete.
Dịka onye na -eweta ngwaahịa tụkwasịrị obi, anyị na -enye 100% ngwaahịa dị mma yana ọrụ ndị ahịa. Ọ bụrụ na ị nweghị obi ụtọ maka ngwaahịa ị nwetara n'ime ụbọchị iri atọ, biko kpọtụrụ anyị ka ị zaghachi ozugbo. Anyị na -eme ike anyị mgbe niile iji hụ na ndị ahịa anyị niile nwere obi ụtọ maka ịzụrụ n'aka anyị.
Nke gara aga: Dongshen soft skin-friendly synthetic hair osisi handle concave ntọala ahịhịa
Osote: Dongshen akwa mma osisi osisi aka sịntetik ntutu etemeete ntọala ahịhịa
Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, Mee Ncha, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete,